Imaaraatka Carabta oo ku bixinayay Malaayiin Dolar Gudoomiyaha Cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya – Daily Som
iyada oo maalinta bari ah ay dhici doonto Doorashada Gudoomiyaha Golaha shacabka ayaa waxaa soo baxaya warar badan oo ku saabsisan Murashaxiinta utaretamaya oo mid kasta uu wato xisbi iyo qar ay wataan dolwdo shishieeye.
Dowlada Imaaraatka carabta ayaa la sheegay in ay wadato dhowr xildhibaan oo qaarkood la fahansanyahay, halka aan qaarkood la fahamsanayn in wadto imaaraatka.
waxaana la filayaa in ay galabta ilaa caawa sii xoogaysan doonaan Ololaha Doorashada Gudoomiyaha ayana hadasii xoogeestay, iyada oo laga dareemayo magaalada.
Siyasiyiinta si dhaw ula shaqeeyay Imaaraatka iyo madaxda maamul gobaleedyada iyo dowlada imaaraatka ayaa isku fahmay in ay taageeraan musharax imaaraatka.
Dadka ka faalooda arimaha siyaasada ayaa ku sifeeyay Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ah murashaxa utaagan qabashada xilka Gudoomiyaha Xisbiga Imaaraatka ee la doonayo in uu Imaaraatka kala shaqeeyo Arimaha Soomaaliya.
Dowlada Imaaraadka ayaa dhaqaalo ku bixisay Doorashada taas oo lagu sheegay mid Hor dhac u ah doorashada waxaana la sheegay hadii uu murashaxoodu soo baxo dhaqaalahii ugu badanaa ay siin doonto xildhibaanada.
Imaaraatka Carabta oo ku bixinayay Malaayiin Dolar Gudoomiyaha Cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya added by Staff on April 29, 2018